Insync muchinjika-chikuva Google Drive mutengi | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri mumwe wevaya vanofarira kuve nemafaira ako mugore kuti ugone kuawana chero nguva kubva kune chero chishandiso iwe chauchaziva. mabasa anozivikanwa kwazvo seDropbox, Rimwe Dhiraivha, Bhokisi, Mega, Google Drive, nezvimwe. Ino nguva ini ndichatarisa pane imwe yacho iyo Google Drive.
Google Drive ndiyo mhinduro yekuchengetedza gore iyo Google inotipa, iyo inotipa 15gb yemahara yekuchengetedza edu akakosha mafaera. Google dhiraivha hauna mutengi weLinux saka haisati iri sarudzo kune vazhinji vashandisi.
Tatarisana nedambudziko iri akasiyana vatengi vasina kufanira vakabuda, iyo inopa akateedzana eakasiyana maitiro.
Mune ino kesi ini ndichataura nezvayo Insync inova mutengi weGoogle Drive, izvi zvinotipa mukana wekugona shandisa iyo kunyorera kwemazuva gumi nemashanu mahara.
Iyo yakabhadharwa vhezheni ndeye 30 USD cheteIko mubhadharo mumwe chete, hapachina, hapana mari inobhadharwa pamwedzi. Saka iri sarudzo yakanakisa iyo inotipa zvese maficha anotipiwa neGoogle Drive kubva pawebhu.
Mukati memamiriro eInsync isu tinowana:
Chinja Google Docs kuHofisi
Chinja kune OpenDocument
Yekufananidza chinongedzo, junction, uye aliases
Zvokunze uye network zvinotyaira
Dzosera mafaera ekuverenga-chete
Faira rinochinja feed
Raira mutsara weLinux
Chengetedza dhairekitori chimiro
Isa Insync paLinux
Mutengi weGoogle Drive inotipa mukana wekugona kuisa iyo application mune akasiyana Linux kugoverwaZvese zvatinofanirwa kuita kuenda kune yavo webhusaiti uye sarudza Linux muchikamu chekurodha.
Nekuita izvi, icharatidza menyu kwatinosarudza kugovera kwedu uye kutipa iyo yakaratidzwa package yayo, mukati mayo matinowana Ubuntu, Arch Linux, Fedora, Raspeberry.
Uye haina kuganhurirwa kune kugovera chete isu tinogona zvakare kuzvibatanidza kune maneja maneja senge nautilus, dolphin, nemo, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Insync muchinjika-chikuva Google Drive mutengi
Victor Moreno Marin akadaro
Zvakanaka, ndinoshandisa. Asi iyo yakawanda-account haishande pakubhadharwa kwe30 usd, ndeye chete. Kana iwe uchida kuwedzera mamwe maakaundi, iwe unofanirwa kubhadhara yakawanda.
Kazhinji pakupera kwegore vanopa marezinesi, saka chenjera kana vasingakupe iwe kubhadhara rezinesi.
(Uye Google, zvinonyadzisa izvozvi uye pasina mutengi weLinux: https://abevoelker.github.io/how-long-since-google-said-a-google-drive-linux-client-is-coming/)
Pindura Víctor Moreno Marín
Zvakanaka, ini handina kukwanisa kuisa iyo yekuyedza vhezheni. Uye ini ndatumira email kuInsync ndichitsanangura izvi uye vanondipindura kuti kana ndaita kuti kubvumirana kuenzaniswe (!?). Havazivi! Kana iyi irwo rutsigiro rwavanopa kune vatengi, isu takagadziriswa
Shandisa iyo DuckDuckGo yekutsvaga injini kubva kune iyo terminal